निरुता सिंहको जीवन कथा – Phalaicha Khabar
निरुता सिंहको जीवन कथा
कृष्णउदाशी २०७७ फाल्गुन १५, शनिबार १२:४५
दमक | एक समय नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा भनाइ प्रख्यात भएको थियो “जब निरुत रुन थाल्छिन् तब निर्माता हाँस्न थाल्छ” । हुन पनि दक्षिणा चलचित्रबाट नेपाली चलचित्र उद्योगमा निरुता सिंहलाई परिचय गराउँदा निर्देशक तुलसी घिमिरेले भनेका थिए “सतकौँको खोजीमा प्राप्त भएकी नायिक हुन् निरुता सिंह” । निरुता सिंह भन्छिन् “त्यतिबेला त्यो भनाइको अर्थ नै मलाई थाहा थिएन ।” तर तुलसी घिमिरेको बोली खेर गएन, निरुता सिंहले त्यसको लागि आफुलाई योग्य र सही साबित पनि गरिछाडिन् । नेपाली चलचित्र उद्योगका १०० वटा भन्दा धेरै चलचित्रमा नायिकाको भूमिकामा छिन् निरुता सिंह । र ती १०० वटा चलचित्रमा अधिकांस चलचित्र सफल छन् । थुप्रै चलचित्र ब्लकबष्टर छन् । चलेनन् भनेका चलचित्रले पनि लगभग लगानी डुबाएका छैनन् । अब यत्ति भइसकेपछि के भन्न सकिन्छ भने, नेपाली चलचित्र उद्योगबाट निरुता सिंहको नाम मात्रै एकै छिनका लागि झिकिदिने हो भने नेपाली चलचित्र उद्योग अपाङ्ग बन्छ र त्यहाँ एउटा खाडलको निर्माण हुन्छ ।
निरुता सिंहको जन्म वि.सं. २०२९ साल असोज १० गते मंगलबार अर्थात सन १९७२ सेप्टेम्बर २६ मा भएको हो । उनी दाजेलिङ्मा जन्मिएकी हुन् । उनी उनका बुबाआमाकी कान्छी छोरी हुन् । उनीभन्दा माथि एकजना दिदी र एकजना दाजु छन् । निरुता आफ्नो बालापन सम्झिँदै भन्छिन् “सानोमा म एकदमै चकचके र बदमास थिएँ ।” सेतो रङ उनलाई सबैभन्दा मन पर्ने रङ हो । उनको घरमा निरुतालाई सबैले ‘निरु’ भनेर बोलाउँछन् । उनी सानो छँदा उनलाई घरका मानिसले र उनका साथीहरूले जिस्काएर बोलाउने नाम ‘बिल्लु’ हो । उनलाई त्यतिबेला ‘बिल्लु’ भनेर बोलाउँदा खुब रिस उठ्थ्यो । निरुतालाई ग्रिन टी पिउन खुब मन पर्छ । उनी क्रिकेटकी फ्यान हुन् । उनी भ्याससम्म साना ठुला क्रिकेटका खेलहरू हेर्ने गर्छिन् । उनलाई सबैभन्दा मन पर्ने ठाउँ काठमाण्डौ हो । उनलाई काठमाण्डौ चाहिँ “मेरो सबथोक हो, मेरो कर्मभूमि हो” जस्तो लाग्छ । निरुतालाई बनपर्ने जनावर बाँदर हो । उनलाई बाँदर देखेपछि हेरेको हेरेकै गर्न मन लाग्छ । बाँदरको चुलबुले र चककचे स्वाभावले उनलाई मोहित पार्छ । निरुता सिंह सर्पसँग हदै डराउँछिन् । “सर्प” भन्ने सुन्दा पनि उनको स्वास रोकिन खोज्छ । टीभीमा पनि सर्प देखिन भने कि त आँखा बन्द गर्छिन कि त च्यानल परिवर्तन गर्छिन् ।
विं. सं. २०४५ सालमा ब्लकबष्टर नायिक तृप्ती नाडकरले चलचित्र खेल्न छोड्दै गर्दा नायिक करिष्मा मानन्धर र गौरी मल्ल नेपाली चलचित्र उद्योगमा उदाउँदै थिए । तर पनि निर्देकश तुलसी घिमिरे भने नयाँ नायिककाको खोजिमा थिए । त्यही सिलसिलामा २०४७ सालमा उनले बनाएको चलचित्र दक्षिणामा पहिलो पल्ट अभिनय गराउँदै तुलसी घिमिरेले नै निरुता सिंहलाई नेपाली चलचित्र उद्योगमा भित्र्याएका हुन् । तलको भिडियोमा निरुता सिंहको समग्र कथा प्रस्तुत गरिएको छ ।